Maamul goboleedyada dalka oo taageeray go’aan kasoo baxay Dowlada Federaalka – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Maamul goboleedyada dalka oo taageeray go’aan kasoo baxay Dowlada Federaalka
A warsame 24 June 2018
Qoraal kasoo baxay madaxda maamul goboleedyada dalka ayaa lagu taageeray go’aan Dowlada Federaalka Soomaaliya kaga dalbatay beesha Caalamka in ay hakiso deeqaha gaarka ah ee goonida loo siiyo maamulka Somaliland.
Golaha Iskaashiga maamul goboleedyada ayaa lagu taageeray qoraalka Dowlada Federaalka Soomaaliya u gudbisay beesha Caalamka, waxa ayna Madaxda maamul goboleedyada sheegeen in aan la aqbali karin deeqaha gaarka ah ee la siiyo Somaliland.
Qoraalkan oo loo diray Beesha Caalamka oo ku qornaa luqada Ingiriiska ayey Madaxda maamul goboleedyada dalkka ku cadeeyeen in nidaamka gaarka ee Somaliland loogu qoondeeyay deeqaha Soomaaliya ka dhaxeeya uu yahay mid halis ku ah qaranimada .
Puntland oo Weerar ku qaaday Laascaanood iyo Maxaabiis saldhigyo laga sii daayay
RW Kheyre oo ka hadlay dhameystirka soo wareejinta hawada Somalia